नेपाल औषधि लिमिटेडले आउँदो असोजबाट सिटामोल उत्पादन गर्ने भएको छ । गत वैशाखबाट जीवनजल उत्पादन गरी पुनः औषधि उत्पादन गर्न शुरु गरेको लिमिटेडले दोस्रो चरणमा सिटामोल उत्पादन गर्न लागेको हो ।
सरकारले जिएमपीअनुसार पुनः सञ्चालन गर्न रू‍‍. १४ करोड ६५ लाख ऋणस्वरुप लिमिटेडलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । पहिलो चरणमा रू‍‍. छ करोड ४८ लाख निकासा गरेको थियो ।
लिमिटेडका महाप्रबन्धक डा रोवर्स कुसुम सुवेदीले असोजबाटै उत्पादन गर्न तयारी थालिएको बताए । सञ्चालनमा आएको तीन महीनाभित्र सिटामोललगायतका औषधिहरु उत्पादन गर्ने लक्ष्यअनुरुप नै काम भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
लिमिटेडले बालबालिकालाई लक्षित गरी सुन्तलाको स्वादमा जीवनजल उत्पादन गरिरहेको छ । सुदूरपश्चिमका जिल्लामा बढी जीवनजल पठाइएको छ । ‘अब एक महीनाभित्रै सादा जीवनजल उत्पादन गर्दैछौँ’ – महाप्रबन्धक सुवेदीले भने ।
यसैबीच, पूर्व उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले आइतबार लिमिटेडमा पुगी पछिल्लो प्रगतिबारे जानकारी लिई काममा कुनै रोकावट आउन नदिन आग्रह गरे । उनले भने – ‘विश्वस्तरीय जिएमपी मापदण्डअनुसार गुणस्तरीय औषधि उत्पादन गर्न लिमिटेडले नयाँ प्रविधिअनुरुप २७ भन्दा बढी प्रकारका आधुनिक प्रविधिले युक्त गुणस्तर जाँच गर्ने उपकरण जडान गरिसकेको छ, उत्पादन गरिएका औषधि अहिलेका प्रचलित बजार मूल्यभन्दा कममा जनताले प्राप्त गरुन् भनेर पुनःसञ्चालनमा ल्याएको छ, यसको निरन्तरता होस् भन्ने चाहना हो ।’
प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन २, २०७४ ०४:५४:०२